ကိုယ်ခံအားတက်စေတဲ့ အစားအသောက်များ – Trend.com.mm
Posted on March 28, 2020 by adminK
ရောဂါတွေကို မဖြစ်မီက ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ကိုယ်ခံအားတက်စေတဲ့ အစားအသောက်တွေကို Trend ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် ဒီဗီတာမင် ၃ မျိုးကို မှီဝဲသရွေ့ အဆုတ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို တွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘေးဘယာ ဝေးကွာကြပါစေ။
ကိုယ်ခံအားတက်စေသော vitamin C
ကိုယ်ခံအားကောင်းစေတဲ့ vitamin B6 B12
11. ကန်စွန့်းရွက် ဘူးညွန့် ဂေါ် ရခါးညွန့် ချဉ်ပေါင်ရွက်
14. ဒန့်ဒလွန်ရွက် မြင်းခွာရွက်
15. အရွက်များ ပြွတ်နေသော အရွက်မှန်သမျှ
ကိုယ်ခံအား တက်စေသော vitamin E
ရောဂါတှကေို မဖွဈမီက ကွိုတငျကာကှယျနိုငျဖို့ ကိုယျခံအားတကျစတေဲ့ အစားအသောကျတှကေို Trend ပရိသတျကွီးအတှကျ ဝမြှေလိုကျပါတယျ။ အခွခေံအားဖွငျ့ ဒီဗီတာမငျ ၃ မြိုးကို မှီဝဲသရှေ့ အဆုတျနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ရောဂါတှကေို တှနျးလှနျနိုငျပါတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဘေးဘယာ ဝေးကှာကွပါစေ။
ကိုယျခံအားတကျစသေော vitamin C
ကိုယျခံအားကောငျးစတေဲ့ vitamin B6 B12
11. ကနျစှနျ့းရှကျ ဘူးညှနျ့ ဂျေါ ရခါးညှနျ့ ခဉျြပေါငျရှကျ
14. ဒနျ့ဒလှနျရှကျ မွငျးခှာရှကျ
15. အရှကျမြား ပွှတျနသေော အရှကျမှနျသမြှ
ကိုယျခံအား တကျစသေော vitamin E